Inkosikazi icikwe yithuna lomyeni yalimba | News24
Inkosikazi icikwe yithuna lomyeni yalimba
Durban - Abhodla umlilo amalunga omndeni wakwaNtsele KwaQongwane eMbazwane, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal ngesimanga sikamakoti wakhona ombe ithuna lomyeni wakhe wakhipha amathambo wayowangcwaba kwenye indawo, kubika iphephandaba ILANGA.
Kuthiwa lokhu ukwenze ngoba ethi liyamcasula uma liphambi komnyango wakwakhe, limqedela indawo.
Ikhulunyelwa emakhoneni into eyenziwe nguNkk Smangele Ntsele uMaGumede ombe ithuna likaMnu Nkosinathi Ntsele, ongcwatshwe ngowezi-2009 egcekeni lakwakhe.
Kuthiwa amathambo ambiwe ngoLwesine olwedlule ekuseni ngovivi.
Amalunga omphakathi abone amadoda emba qede kwathathwa ibhokisi elinamathambo kaMnu Ntsele lafakwa emotweni yabangcwabi yashaya yachitha.
Amalunga omndeni wakwaNtsele abengazi, ahletshelwe ngomakhelwane afika ngezithuba zabo-07:00 ekuseni ukuyokhuza umhlola kanti afike emuva kwendaba - isidumbu sesingcwatshwe kwenye indawo.
UNkk Ntsele utshele ILANGA ukusuka nokuhlala ngento emenze wanquma ukumba ithuna lomyeni wakhe.
"Ngilimbile ithuna ngawakhipha amathambo ngayowangcwaba kwenye indawo ngoba belingihlukumeza liyisinengiso empilweni yami leli thuna, bese ngibekezele isikhathi eside liphambi komnyango womuzi wami.
"Iphutha elikhulu elenziwe ngamalunga omndeni wakwaNtsele ngesikhathi kufihlwa umyeni wami kawakhulumanga nami angibuze ukuthi ithuna lizombiwa kuphi, azimbele la ethanda khona - phambi komnyango womuzi wami. Ithuna beliphakathi negceke, phambi komnyango engingena ngawo, ngingakwazi kwenza lutho egcekeni," kusho uNkk Ntsele.
Uthi ubengakwazi ngisho ukunweba umuzi wakhe ngendlela ethandwa nguyena ngenxa yethuna.
Utshele leli phephandaba ukuthi ulandele yonke imigudu efanele, ubikile enduneni ngokususa kwakhe ithuna egcekeni.
Uthi uchithe imali engaphezu kuka-R20 000 ngokwenza lokhu.
"Into engingayenzanga nje wukubikela umndeni ngenxa yokuthi bengazi ukuthi ngeke uvume ngoba lokhu okwenzile (ungcwaba egcekeni) bewufuna ukuhlukumeza mina. Lokhu osuhamba ukukhuluma uthi ngifuna ukudayisa umuzi, ngamanga ngeke ngishiye umuzi wami," kusho uNkk Ntsele wanenezela ngokuthi umyeni wakhe usengcwatshwe emathuneni omphakathi.
ILANGA likhulume noMnu Sthembiso Ntsele - oyilunga lomndeni - obethukuthele egane unwabu ngesenzo sikanina omncane.
"Sithole ukuthi usefuna ukudayisa umuzi kababa omncane engawazisile umndeni nezingane zikababa omncane ezindala, enjalo nje useqalile nokufaka amadoda akhe emagcekeni omuzi wakwaNtsele.
OLUNYE UDABA: Kugwetshwe umkhulu ngokudlwengula abazukulu
“Siyabona ukuthi bekumphazamisa ukungena namadoda kukhona ithuna lomyeni wakhe egcekeni, yingakho enqume ukulisusa. Siwumndeni isihlukumezile kakhulu le nto eyenziwe ngumama omncane ahlukumeze ubaba omncane esekade washona futhi sibe samngcwabela emzini wakhe, into okwakuyisicelo sakhe esaphila. Sizolusukumela udaba lwakhe ngeke kugcine yena," kusho uMnu Ntsele.
Uthi selokhu washona uyise omncane, uMaGumede akaziphathisi okwenkosikazi eshadile.
"Kasinendaba nokuqoma kwakhe, okusiphatha kabi siwumndeni wukuhlukumeza ubaba omncane eseziphumulele.
"Kumanje kasazi ukuthi umngcwabe kuphi, ukube ubenenkinga nethuna lakhe bekumele akhulume nomndeni ayongcwatshwa ekhaya elikhulu ngoba maningi amathuna abantu basekhaya asebashona ekhaya elikhulu kunale nto ayenzile yokuthatha amathambo akhe ayowalahla lapho okwazi yena yedwa khona," kusho uMnu Ntsele.
Induna yendawo, uMnu Simon Zikhali, utshele ILANGA ukuthi udaba lokumbiwa kwethuna lubukiwe kuyena.
Ucele ukuba abuye ashayelwe usemhlanganweni. ILANGA lishayele isazi sezamasiko, uDkt Velaphi KaluPhuzi Mkhize, woMsamo Institute, othe: "Okokuqala nje le nkosikazi ingcolile, kungani yenze into efana nale yodwa ingaxhumananga nomndeni? Le nto ayenzile ngokwesintu iyiphutha elikhulu ngoba umakoti uma eganile emzini uyingane, akakwazi ukuzithathela izinqumo yedwa.
“Lo muzi azishaya isifuna ngawo athi ngowakhe kuyiphutha lokho, umuzi bawakhela uyisezala, umuzi wakhe kuyoba yilo ayowakhelwa ngamadodana akhe, okwamanje akanawo umuzi yena."
Uthi umnumzane uma edlulile emhlabeni kuyisiko nje ukuthi abekwe egcekeni lomuzi wakhe.